Book Excerpt: Don't Envy the Bench — Trip LEE - OFISIALY SITE
Ny hany fotoana no tena nanao azy tao amin'ny tany teo am-tena faran'ny lalao-fantatrao, raha nataony tao ny bandy ratsy dia mahatsapa ho. Tiako ny hilaza ny tenako dia namonjy ahy ho an'ireo segondra farany mba hahafahako hiarovana ny fandresena. Rehefa nifandray tanana ny mpanohitra ekipa taorian'ny farany buzzer, Tsapako toy ny mpilalao dia snickering ao anatin'ny rehefa nijery ahy ka nanao hoe:, "Tsara lalao."
Rehefa nivoaka avy any an-kabine taorian'ny fandroana, tsy misy olona te sary miaraka amiko. Tsy misy ny sekoly ambaratonga faharoa ankizy niandrandra ny ahy. Tsy misy olona eo amin'ny ekipa na nialona ahy. Nahoana? Satria aho Lee Spike kokoa noho Michael Jordana. Aho mpankafy manao Jersey. Izaho no lehilahy izay tsy nanao azy ho any an-lalao, ary tsy misy fialonana ny benchwarmer.
GET NY GAME
Tsy afaka mbola mahatsiaro fitifirana olona mihatsaravelatsihy rivotra jumper sy miantso ny anaran'ny andraikitra tsy fantatra mpilalao. Ireo ry zalahy mbola matihanina, Fa raha tianao dia afaka varotra toerana tamin'ny mpilalao basket, fa matetika ny starterDouble, ny lehilahy izay avy any amin'ny tendron'ny ravin-ho any farany buzzer. Hanadino na oviana na oviana ianao, raha mifamadika Jordana tanana amin'ny midair na rehefa Ray Allen namely fa ny telo am-buzzer. Ireo no ry zalahy no te-ho. Ry zareo ao amin'ny hetsika amin'ny fotoana manan-danja ireo, tsy hoe spectating. Fa noho ny antony ataontsika ny mifanohitra raha ny amin'ny fiainana. Ny olona rehetra te-ho benchwarmer.
Inona no holazaina amin'ny izany? Raha naneho ny amin'ny mahazatra fonenan'ny mpianatra oniversite sy nanadihady ireo mpianatra momba ny tanjona ho an'ny enim-bolana, nefa tsy mba nihaino ianareo betsaka momba ny fiainana ho an'ny Mpanjaka. Ianao Te handre bebe kokoa momba ny fahafinaretana tsy voahevitra noho ny milalao ny anjara toerana lehibe teo amin'ny tantara. Angamba ianao mandre Te mihitsy aza ny sasany 7:00 a.m. lojika. Vonona aho ny mihevitra anao Te hahazo valiny koa amin'ny sekoly ambaratonga faharoa na ny birao. Isika rehetra dia manana tanjona sy ny faniriany, fa Andriamanitra dia tsy foana ao aminy.
Manantena aho fa tsy maka ny zavatra aho hoe toy ny mitsaratsara fanamelohana. Tsy aho mpitsikera sarimihetsika trashing ny hanao zavatra; Aho manohana ny mpilalao miezaka ny hahazo ny andalana tsara koa. Ho mandainga aho raha hoy aho nanaraka foana i Jesosy toa manintona. Right dia tsy mahatsapa marina foana.
Tadidiko ny fotoana, ela taorian'ny nanatevin-daharana ny mpiasa ao amin 'ny fiangonako, rehefa namako rehetra tamin'ireny nandeha hanatanteraka amin'ny tsy mampino fetiben'ny mozika. Te mba ho na dia ratsy, nefa tsy afaka manao izany satria nianjera nandritra ny herinandro voalohany ny asa vaovao. Tsy maintsy niady ny fialonana ao am-poko. Indrindra rehefa nahita azy ireo aho, famoahana sary amin'ny aterineto ny mahagaga zavatra niainany.
Indraindray isika dia mahatsapa toy izany amin'ny fiainana. Mora ny hitsiriritra ny hafa, indrindra rehefa ry zareo manao zavatra lehibe tahaka ny namako no nanao. Fa na dia fantatsika ny olona miaina diso, hahita ny tenantsika isika indraindray maniry ny hiaraka amin'izy ireo. Ary izay mahatonga hanaraka an'i Jesosy te hatao nalaina avy teo amin'ny lalao, tsy hatao subbed in. Nahoana anefa isika no hitsiriritra ny hafa ary mieritreritra isika dia voa mafy tokoa?
Nahoana isika no mihevitra isika dia voa mafy?
Bad mahita tsara
Iray amin'ny olana dia fa afaka ihany no mahita izay marina eo anoloan'ny amintsika. Malahelo ny lehibe isika sary. Izany toy ny fakan-tsary, rehefa manoloana ny zavatra any mifantoka sy ny zava-drehetra aoriana, manjavozavo. Mila manitsy ny Mitovy amin'ilay family mbola toy izany koa ny sary iray manontolo dia ho mazava.
Misy olona tsy eto an-tany izay tsy miady mafy mba hahita mazava tsara. Izany no iray amin'ireo vokatry ny mpanota fo. Fa rehefa hanipy youthfulness an-mira, dia manampy ho amin'ny loza. Iray-taona ankizy sahirana handeha tsara, ary roa-polo- somethings miady mba hahita tsara.
Tsy mahagaga. Izany Anisan'ny dikan'ny hoe ho tanora ao anatin'ny tontolo lavo. Ny fiainantsika no fohy ary efa hita be ihany. Sarotra ny sary an-tsaina ny rehetra rehefa Puzzle efa telo ihany no nahita sekely. Tsy midika akory izany fa tokony flog ny tenantsika amin'ny henatra; nefa tsy hoe tokony ho mailo isika, satria mpanota tsain'ity Mety hidiran-doza.
Efa mba nanandrana mitondra fiara ao amin'ny snowstorm? Ny Krismasy taorian'ny zaza voalohany teraka, mahatahotra snowstorm namely ho mivady nitondra niverina DC avy any Pittsburgh. Ny ranomandry resy ny jiro eo amin'ny SUV ka lavo haingana fa ny windshield wipers tsy haharaka izany. Ny knuckles tonga fotsy tahaka ny mahazo natahotra be ny kodiarana; Tsapako ny fiainan'ny vadiko sy ny zanany lahy teo an-tanako.
Henjana aho. Afaka ihany aho nahita vitsivitsy santimetatra eo anoloan'ny ny tavako, izany no ara-bakiteny tsy nahalala izay haleha. Tsy nahafantatra aho hoe inona no aloha, ary tsy maintsy manantena fotsiny dia mety miasa rehetra avy. Izany fahatsapana tsy tsara. Tsy hijery raha toa nisy fiara nijanona mialoha na mikosoka ny olona eny ny varavarankely tao amin'ny fijanonana-ary-handeha fifamoivoizana.
Tsy voalaza aza ny lalana slick mbola. Mikapoka ny freins natao ny fiara Nikisakisaka toy ny ankizy manao ba kiraro eo amin'ny kapila tanimanga tany. Afaka mahatakatra ny antony dia ny toerana tena fiara kely indrindra mandrakizay. Aho mitsinjo lavitra sy amin'ny toerana malama.
Efa nieritreritra mikasika ny fomba tsain'ity loza dia mety ho eo amin'ny fiainantsika? Raha isika ihany no mandray fanapahan-kevitra mifototra amin'ny zavatra marina eo anoloan'ny amintsika, isika maintsy mihazakazaka ho doza. Loatra Maro amintsika no miezaka ny miaina ny fiainantsika tsy misy miraharaha izay hitranga tatỳ aoriana.
Mamon amin'ny antoko mety ho toa toy ny tsara ny hevitra ao amin'ny fotoana, fa manala baraka an'Andriamanitra sy mitarika ho adala fanapahan-kevitra. Matory amin'ny olona io na tsia mety ho toa toy ny fandresena eo amin'ny fotoana, fa izany karazana fifandraisana akaiky dia tsy natao mba ho tia afa-tsy ny manam-paharoa firaisana ny fanambadiana.
Ho isika mitsoraka ao ireo karazana fanapahan-kevitra kokoa isika rehefa mandeha mamaky ny boky, fa ny hevitra dia, tsy maintsy hieritreritra lehibe sary. Fanapahan-kevitra rehetra dia manao dia kely tapa-lehibe kokoa piozila. Ary tsy mijery ny sary lehibe ho an'ny boky, isika mametraka ny sekely Ho diso isaky ny. Tena mahatsiravina ny sarobidy ny zava-nitranga teo mihoatra noho ny androm-piainany iray manontolo.
*This is an excerpt from the third chapter of Trip’s new book, Mitsangàna. Aza adino, rehefa mialoha mba Mitsangàna amin'ny Janoary 26, ianao hahazo ny bunch ny fanomezana maimaim-poana, anisan'izany ny tombony lalana izay tsy ho eo amin'ny tahirin-tsary. Ireto ny tsipiriany rehetra mba hanavotra ny fanomezam-pahasoavana: http://risebook.tv/preorder
Emanuel • Janoary 15, 2015 amin'ny 12:16 PM • navalin'i
Matt • Janoary 15, 2015 amin'ny 1:54 PM • navalin'i
NkondelinaChileshe • Janoary 16, 2015 amin'ny 5:45 aho • navalin'i
The last sentence got me. Its tragic to treasure a moment in time more than an entire lifetime. The former is almost always a product of envying where otheres are in life. Let’s thank God for where we are. There’s a reason why we are there. Na izany aza, we need to acknowledge him through it all.
Kiggundu brian • Janoary 16, 2015 amin'ny 2:19 PM • navalin'i
Kiggundu brian • Janoary 16, 2015 amin'ny 2:24 PM • navalin'i
Shantiki • Janoary 16, 2015 amin'ny 9:13 PM • navalin'i
Carlton • Janoary 17, 2015 amin'ny 1:19 PM • navalin'i
Gao • Janoary 18, 2015 amin'ny 1:50 aho • navalin'i
Oh!God if I can only have this book…this piece is awesome and now I’m imagining the big picture(boky)..#moreblessingsToU
JieWoo • Janoary 19, 2015 amin'ny 2:39 PM • navalin'i
Terrell • Janoary 20, 2015 amin'ny 2:07 aho • navalin'i
tamsyn • Desambra 28, 2015 amin'ny 7:35 aho • navalin'i